Subxanallah:Fatxiyo Cabsiiye oo diinta si xun ugu geftay. - xog baahiye
Fatxiyo cabsiiye oo ah filim sameeye haysata dhalashada Mareykanka ayaa waxey horraantii bishan si xun uga hadashay arrimo la xiriira qoyska ayadoo wareysi siineysa Tv laga leeyahay dalka mareykanka.waxey si qarsoodi ah u qeexday in dumarka la xoogi karo isla markaana loo galmoon karo.
Xog sir ah oo aannu ka helnay ilo ku dhow Fatxiyo Cabsiiye, ayaa inoo caddeeyay inay jiraan muuqaallo ay ugu fatwooneyso haweenka Soomaaliyeed, ayadoo ku boorrinaysa inay awood u leeyihiin inay ninkooda u diidaan gogol kolka aysan dareemeyn shahwo.
AKHRISO: Degdeg:Al-fanaan Dooli oo sheegay in ay neefta ka fuqday kadib markii ay kala tageen xaaskiisii.
Dhanka kale,qaar kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaan arrintan carrabka ku adkeeyay waxayna sheegeen in ay jiraan dad doonaya inay ku beeraan haweenka soomaaliyeed dhaqamada xun xun ee reer galbeedka.
Sheekh Shibli oo kamid ah culimada ugu weyn dalka kenya oo kahadlay arrintan ayaa daaha ka rogay inaysan bannaaneen in haweenka ay isu diidaa nimankooda ayagoonan heysan cudur daar macquul ah.
AKHRISO: Subxanallah: gabar somali ah oo arin layaab leh kukacday cameron herrin dartiis
Waa markii ugu horreysay haweeney Soomaaliyeed oo sidata fikrad dafireysa diinta ay ka hadasho arrin noocan oo kale.
Fatxiyo cabsiiye waa qoraa Soomaali-Mareykan ah, soo saare, jilaa iyo filim sameeye. Waxay la shaqaysay labo dokumentary, iyo sidoo kale sheekooyin mala -awaal ah, waxayna daabacday sheeko graphic ah oo cinwaankeedu yahay,
The Imperceptible Peace Maker.
AKHRISO: Subxanallah: Waxey sheegeen arin lama filan ah oo horay aan somalida horay looga baran .
Subxanallah:Gabadh soomaali ah oo ninkeeda u guurisay saaxiibteed.
SUBXANALLAH: gabdhahan saan lagama filaneyn waa dhaqan xumadii ugu darneed 😭
Subxanallah: Waxey sheegeen arin lama filan ah oo horay aan somalida horay looga baran .
Subxanallah:gabar Yar oo 10 sano jir ah oo ayeeydeed KU dishay gobalka mudug iyo sirta ka dambesay
Degdeg:Al-fanaan Dooli oo sheegay in ay neefta ka fuqday kadib markii ay kala tageen xaaskiisii.
Sidee qof jaceyl loogu abuuraa.raac tallaabooyinkan.